Ma ahan wax la fududeysan karo dhibaatooyinka ay la iman karaan caruurta soomaaliyeed ee la nool qoysaska aan muslimka ahayn, ee ku nool dalalka Yurub iyo Waqooyi Ameerika.
Maalintii jimcada ahayd, goor aan ka imid salaaddii jumcada, masaajidka waqafka Odense, Denmark, ayaa waxaan soo maray dukaan aad u weyn oo la yiraahdo OBS, si aan waxyaabo aan u baahnaa uga iibsado. Annigoo dukaanka dhexdiisa ku jira, ayaa waxaan meel aan iga sii fogeyn ka arkay wiil yaroo soomaaliyeed oo la socda qoys reer Denmark ah. Qoyskii ayaa waxaan ka codsaday inaan la hadli karo wiilkan, hase ahaatee si sahlan ayeey iigu oggolaadeen.
"jeg ved det ikke hvad du snakker om?!"
Wiilkii ayaa waxaan weydiiyay inuu soomaali yahay, wuxuuna iigu jawaabay ereygan dheenishka ah: "jeg ved det ikke hvad du snakker om?!" oo macnaheeda ah garan maayo waxa aad ku hadlayso. Waan gartay inuu wiilku aqoon af soomaaliga, markaasaan kula sheekeestay af dheenish.
Waxaan weydiiyay inuu soomaali yahay?, wuxuuna ii sheegay inuu soomaali yahay, da’diisuna tahay 11 jir, inuu la nool yahay reer u dhashay Denmark, dhigtana dugsi aynan soomaalida dhigan, wuxuu waddanka Denmark yimid isagoo 3-4 sanno jir ah.
Waxaan weydiiyay halka ay ku nool yihiin reerihiisa?, wuxuuna dareen naxdin leh iigu sheegay inay ku nool yihiin isla magaallada Odense, Denmark, iyadoo aan loo ogolayn booqashada.
Akhri halkan June 10, 2000
Maxaynan kuu soo booqan karin reerahaaga?, ayaan weyiiyay, garan maayo ayuu yiri isagoo welibana madaxa ii ruxay. Waxaa dhici karta inay dowladda cunugga reerka kala wareegtay oo ay markaas ku wareejisay reerkan dheenishka ah, ayaan si hoos ahaan naftayda ugu iri, wayna dhacaan qisooyinkan qadhaadh oo kale.
Intii uu hadlayay, waxaa iga soo qubatay ilmo, maxaa yeelay waxaan intuu hadalka waday ka fekereyay mustaqbalka uu ku danbeyn doono cunugan muslimka ah ee soomaaliyeed. Waxaan ka fekerayay tarbiyadda sumeysan ee gaalnimada ah ee lagu ababinayo cunugan soomaaliyeed. Waxaan ka fekeryay cuntada uu cuno maalin kasta.
Wuxuu ii sheegay cinwaanka uu deggan yahay iyo dugsiga uu dhigto magaciisa, waxaana ku iri waxaan isku dayayaa inaan ku soo booqdo, iyadoo aanan hubin inaan oggolaansho buuxda ka helayo qoyska uu cunugga la nool yahay.
Darxumo iyo daal ayaa wejigiisa ka muuqday cunugga, muuqaalkiisana wuxuu u ekaa sidii cunug u baahan inuu la noolaado reerihiisa soomaaliyeed ee muslimka ah. Qisadan naxdinta leh waa mid ka mid ah boqolaal xaaladood oo ka dhacda dalalka Yurub iyo Waqooyi Ameerika. Waxaa dalka Denmark ka dhacday in qoysas dhowr ah soomaaliyeed laga qaaday ubadkooda, iyadoo arrintaas loogu aaneenayo caruurta oo la jirdilay, caruurta oo la silciyay iwm, taasoo inta badan u dhacda si is maandhaaf ahaan ah iyo si ula kac ahba. Waxaa hadda kahor ka dhacday magaallada Odense in qoys soomaaliyeed laga qaato labo ilmood oo ay dhaleen, iyadoo ilaa iyo haddana ay weli la nool yihiin reero u dhashay Denmark. Waxaa jira caruur soomaaliyeed oo ka yar da’da 15-ka ay si keli ahaan ay u yimaadeen dalka Denmark, iyadoo markay sharciga heleena ay dowladda si toos ah ugu wareejiyeen guryaha dowladda.
Mid ka mid ah caruurtaas ayaa waxaan kula kulmay Jaaliyadda dhaqanka soomaaliyeed usbuucii la soo dhaafay, isagoo ii sheegay inuu yimid dalka Denmark isagoo keligii socda. Reerkiisa oo ku nool Muqdisho, Soomaaliya ayaa waxay siiyeen ninkii mukhaliska ahaa ee bugta ku waday lacag gaareysa 5000 USD!!. Maanta wuxuu wiilkaas ku nool yahay guryaha dowladda, dadka gacanta ku hayana waa dad dheenish ah. Sidoo kale waxaa dhacday caruur ka yar da’da 10 sanno in lagu arkay iyagoo fadhiya hoolalka tranist-ka ee garoonka diyaaradaha Copenhagen, Denmark, iyagoo wax qaraabo aanan la socon. Waa yaab iyo amakaag. Waxaasoo dhammi waxay ka tarjumayaan mas’uuliyad darrada haysata qaar ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed, iyagoo dantooda weyni ay tahay oo keliya inay caruurtooda soo gaaraan dalalkan Yurub iyo Ameerika.
Waxyaabaha ay caruurtooda u soo diraan, ayaa ah iyagoo caruurtooda kala baqaya inay ku dhintaan dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya, amaba ay ku biiraan kuwa burcadka ah ee iyaga dagaalamaya. Qaar kale, waxay ilmahooda u soo diraan bal inay waddamadan ka helaan dugsiyo waxbarasho maadaama uu dalkii Soomaaliya tobankii sanno aynan ka jirin waxbarasho. Waxaynan ka fekerin mustaqbalka caruurtooda ee ku wajahan dhinaca diinta, dhaqanka iyo soomaalinimadaba. Miyeynan ogeyn waalidiintaas soomaaliyeed inay jirto maalin uu Ilaah weydiinayo mas'uuliyadda caruurtooda xagga diinta?, Mise og yihiin in markii ay caruurtooda yimaadaan in lagu wareejinayo qoysas gaalo ah, waa haddii ay si keli ahaan ugu soo diraan dalka Denmark iyo dalalka kaleba ee qurbaha.
Dhinaca kale, waalidiinta ku nool dalka Denmark ayaa intooda badani ku nool wel wel iyo cabsi ay u qabaan mustaqbalka diineed, dhaqameed ee caruurtooda, iyagoo qaar ka mid door biday inay ubadkooda ula cararaan qaar ka mid ah dalalka Carabta oo iyaguba qaarkood aan dhaamin kuwii ay caruurtooda kala soo guureen. Qaar kale, way is dhiibeen, oo waxay yiraahdeen wixii uu Ilaah caruurta u qaddaray ayun bay la kulmi, haddey gaaloobaan iyo haddii kaleba, iyagoo iska indha tiray asbaabaha badbaadinta caruurtooda, qaar waxayba dhibaatada ka haystaaa is fahamka iyaga iyo caruurtooda, waana kuwa mararka qaarkood adeegsada jir dil iyo iyagoo u mooda meesha ay joogaan inay tahay Soomaaliya.
Dalka Denmark iyo dalalka kale Yurub ee ay soomaalida ku badan tahay waa ka mamnuuc in caruurta la jir dilo, waana tan inta badan keenta in qoyska caruurtooda jir dila laga qaado ubadkooda.
Caruurta iyo haweenka soomaaliyeed ayaa u badnaa intii soo gashay dalalka Galbeedka, iyagoo ka soo cararay silicii iyo saxariirihii uu keenay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, waxaana shaki ku jirin in qabqablayaashii iyo dagaal oogayaashii dagaalka ay sabab u yihiin dayaca iyo darxumada maanta haysata caruurta soomaaliyeed, caruurtaasoo qaarkood ay leeftay madaafiicdii dagaalka, qaarkoodna sababay inay saf-ka-galaan safafka dagaalka, qaarkood iyagoo qaxaya yimid dalalka Yurub iyo Waqooyi Ameerika iyadoo aanan la ogeyn meesha ay ku danbeyn doonto caruurtaas mustaqbalkooda.